Gbaa ngwa Android ™ na Linux | Site na Linux
Uzoamaka | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Hey anụ ọhịa, wetuo obi, amaara m na ị ga-eme mkpesa na nke a ma ọ bụ na ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ ma ọ bụghị ngwa niile na-arụ ọrụ tupu ị mee mkpesa, gaa na nke a ndepụta, biko zuru ike! @ # $% #
Na nke a, anyị ga-ekwu maka otu esi agba ọsọ, ma ọ bụ kama decapitate (RAE joke) ngwa gam akporo (ma ọ bụ apk) na Linux. Maka post a, a ga - enwe ụzọ dị iche iche yana ka ị ghara igbu oge n'ịgụ, nke kachasị baa uru bụ ịzụta ekwentị (ma ọ bụ ekwentị dịka ha na - ekwu na mba ndị mepere emepe karịa Spain) yana Android ma ọ bụ Cyanogen dị ka m.
Ma ọ bụ na ịnwe ngwà na Linux dị ezigbo egwu ma na-achọsi ike ma enweghị ụgha, ihe kachasị baa uru bụ ịwụnye ha na ala, m na-eji ngwa ngwangwa eji m ya na One Plus One (OnePlus One), mana iji jikọta ya a obere post na-abịa kemfe.
1 Formdị mbụ: arChon
2 Seconddị nke abụọ: ARC Welder
3 Daashi: VirtualBox + Android x86
Formdị mbụ: arChon
Ma ọ bụ na ọ bụ n'azụ nwa afọ na gam akporo x86, nke a bụ nhọrọ kachasị mma ebe ọ bụ na ọ kachasị mma n emomi ma nwee ngwa ọrụ kachasị arụ ọrụ.
Iji jiri ya mee ihe, anyị chọrọ Google Chrome ma ọ bụ Chromium (ihe nchọgharị racism doro anya, n'ihi na Firefox nwere ntutu na-acha uhie uhie, ọ gaghịzi akwado nnukwu ngwa ma ọ bụ gịnị?), archon dabere na nke a.
Mgbe anyị nwere ya, anyị ga-ebudata faịlụ a página, nke na-emegharị na Chrome anyị, ị maraworị ma ọ bụrụ na ọ sitere na Pikachu ma ọ bụ Charizan :), njakịrị n'akụkụ, ị ga-ahọrọ ụlọ 64-bit ma ọ bụ ọzọ, ọ bụrụ na ị maghị nke ọ bụ, gaa Ozi
Mgbe ahụ, anyị tọpụ ma ọ bụ wepu ya wee gaa Google Chrome (ma ọ bụ Chromium), Nhọrọ> Mgbatị ma mee ka ndị nrụpụta rụọ ọrụ ma họrọ folda a na-emegheghị; Foto ruru otu puku okwu 😛
Ihe ngosi uhie bụ ihe nkịtị
Ugbu a, anyị ga-ebudata ngwa ọzọ, nke bụ Twerk na ee e, enweghi ụmụ agbọghọ na-ekpo ọkụ na-eme bikini, ọ bụ ezie na ọ gaghị adị njọ ... Returnlaghachi na post, anyị na-ebudata ngwa ahụ (site na Google Chrome), si ebe a, anyị mepee ya. Ngwa a na-agbanwe apk n'ime ngwa maka arChon ma ugbu a ị ga - enwe obi abụọ: Ebee ka anyị si enweta ngwa ahụ? Ọ dị mma, ndị ọyị m nwetara ha ekele maka nbudata ngwa, ana m adọ aka na ntị verbatim "Ngwa anaghị ebudata ma ọ bụ rụọ ọrụ mgbe niile"
Iji budata na Ngwa nbudata Anyị na-edepụta njikọ nke ngwa ahụ (site na Google Play) na anyị chọrọ ma anyị tinye ya na igwe nchọ, anyị na-enye Nweta njikọ (ma ọ bụ ntinye Ntinye), Budata ma budata. N'ihe atụ m, m ga-eji ngwa Appy Geek oge niile.
Mgbe anyị meghere Twerk, anyị dọrọ ngwa ahụ gaa na Dọkpụrụ na Drop, anyị pịa pink gam akporo ma chekwaa folda ahụ na ebe anyị chọrọ.
Mgbe ahụ, anyị ga-aga na akụkụ ndọtị ahụ, anyị na-ahụ na anyị nwere ndị nrụpụta nhọrọ arụ ọrụ, anyị na-enye ya ka ọ kwụnye ndọtị a na-emegheghị, anyị na-ahọrọ folda ahụ anyị mepụtara, n'ọnọdụ m com.mobilesrepublic.appygeek.
Anyị na-enye Start na voila, anyị nwere ngwa ahụ na-arụ ọrụ. Dọ aka na ntị, ọ bụghị ha niile na-arụ ọrụ mana ị nwere ezigbo ohere na ọ ga-arụ ọrụ.
Ma ị nwere ngwa gị na-arụ ọrụ.
Seconddị nke abụọ: ARC Welder
Zọ a dị mfe karị, ebe ọ bụ na anyị ga-ebudata ngwa ahụ, na-echeta site na Ngwa Downloader, budata ngwa Arc Welder na Chrome App Store (na nke a njikọ) ma anyi meghee Arc Welder ngwa, anyi puru Choro, anyi ahoro ebe apks a ga azoputa, M ahoputara Desktop, anyi ga ahota apk ma anyi aputa Launch app. Dị ka ọ na - arụ ọrụ oge niile, ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ rụọla m ọrụ ọzọ.
Daashi: VirtualBox + Android x86
Nke a bụ ego, nke ahụ bụ na nke a bụ nhọrọ na ndakọrịta karịa na ihe, ọ bụ gam akporo n'onwe ya mana enwere m ike ịkwado gị mgbe ụfọdụ na ọ ka mma iji Arc Welder ma ọ bụ arChon, karịa iji igwe arụmọrụ (anya, M na-ekwu igwe mebere, nke ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ụmụ amaala) mana ọbụlagodi ọ ka bụ nhọrọ yana ọtụtụ ngwa ndị ọzọ dakọtara yana arụ ọrụ dabara adaba (ana m ekwu nke a n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma maka m ) ma na nke ọma iji rụchaa akụkụ a, m ga-ahapụ gị vidiyo nke Ntinye na nyocha.
Ezi ndị enyi, nke a abụrụla ọkwa niile taa, enwere m olileanya na dịka ị masịrị ma jee ozi oge niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Gbaa ngwa Android ™ na Linux
Edemede dị ezigbo mma ma dee nke ọma ma kọwaa ya, ọ bụ ezie na maka m, dịka onye Spaniard, okwu ị kwuru banyere Spain nke m na-ekwenyeghị na ya enweghị isi. Enwere ike ịtụle ma katọọ ọtụtụ ihe mana ma a bịa n'okwu okwu na ụtọasụsụ, n'echiche m n'ezie, anyị bụ ndị kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ bụghị kacha mma. Ekele m na-ekele gị maka edemede ahụ.
Daalụ maka ikwu.
Site n'ụzọ, abụ m onye Castilian Spanish na m na-ekwukarị banyere agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ, ma ọ bụrụ na anyị atụlee otú ndị mmadụ si ekwu okwu na Spain na ebe ahụ, ọnụ ọgụgụ okwu siri ike dị elu na Spain.
Na mmepe ego (ọ bụ ezie na anaghị egosi ọtụtụ ụbọchị ụbọchị a) yana ọdịbendị, Spain na-enweta aka.
Site n'ụzọ, agbụrụ m bụ onye Spain.
Zaghachi nye erUzama
O doro gị anya na ị bụ onye Spen? Aghọtaghị m ọkara ihe i kwuru. N'ọnọdụ ọ bụla, ịdị afọ iri na anọ, echere m na ị kwesịrị ịhapụ ụdị okwu ndị ahụ maka mgbe ị tozuru ogo. Ana m agwa gị n’enweghị nsogbu.
Zaghachi ka folker
Ndewonu ozo. Ebumnuche m mgbe m kwuru okwu a abụghị ka o bute ọgba aghara. Amaara m na ọ bụ njakịrị karịa nke siri ike ọ bụ ezie na ọ nyere m nsogbu ntakịrị. Achọrọ m ime ka o doo m anya na isiokwu ahụ masịrị m nke ukwuu nakwa na m na-agbalị itinye ihe a kọwara ebe a n'ọrụ. Ekele na ekele maka imezi gị.
Site n'ụzọ, ọ bụghị mmadụ niile nwere agụmakwụkwọ ị gosipụtara ịrịọ mgbaghara.
Kedu ka m ga-esi ghara ime mkpesa dị ka nwa agbọghọ? Kedu ka ị si achọ igbochi nnwere onwe m ịme ihe ọ bụla? Ndi LINUXERO BEWA B BE TALIBAN? …… 🙂
Kpoputa aha gi, arc-welder na aru oru karie nke ozo abuo.
Ee e, naanị ịdọ aka ná ntị, ka ị ghara ịgagharị na-emetụ m aka.
Are nọ n'aka nri gị ma esochila m.
Missed hapụ Genimotion
"Ma ọ bụ cellular dị ka ha na-ekwu na mba ndị mepere emepe karịa Spain"
Onye bi na otu n'ime mba ndị emelitere okwu ahụ kwuru ya ...
Abụ m Spanish Castilian, amụrụ m na Spain ma ọ bụrụ na ị kwuru eziokwu na m kwuru bụ nzuzu, mana ekwentị dị mma karịa ekwentị, ebe ekwentị bụ ihe niile na-agagharị, okwu dị mma dị ka ọnụ.
Ma gbaghara m nke ukwuu maka ikwu ahụ, ka m mehiere.
onye na -ekwu okwu dijo
Mobile bụ site na ekwentị mkpanaaka. Nke ahụ bụ, enwere ike ịmegharị ma ọ bụ ebugharị ya.
Eugenio Diaz kwuru dijo
Na cellular ihe niile nwere mkpụrụ ndụ!
Zaghachi Eugenio Diaz
Anyị nwere ike ilekwasị anya na ọdịnaya nke post, akụkụ ọrụ aka ma hapụ ihe onye edemede ahụ chere banyere obodo ya n'otu akụkụ, nri?
Daalụ! Ihe omumu a mutara, mee ederede ederede, obughi nkatọ
Anaghị m agwa gị ya. Ana m ekwu na ọ baghị uru ihe ị chere gbasara otu isiokwu ma ọ bụrụ na nke ahụ abụghị isiokwu nke post. Ihe dị mkpa ebe a bụ otu esi agba ngwa gam akporo na Linux, ọ bụghị ihe ị chere ma ọ bụ na ọ bụghị gbasara Spain ... na nke ahụ bụ ihe m na-achọ ịgwa jm.
Nsogbu a abụghị ihe onye ọ bụla na-eche banyere isiokwu ọ bụla, nsogbu bụ na na nke a ọ bụla Spanish na-abanye na post ma gụọ okwu ahụ ga-ewe iwe. Ebe ọ bụ na ekwuru okwu ka na-ebipụta n'isiokwu ahụ ma edebeghị ma ọ bụ ehichapụ ya. Omume nke onye ode akwukwo nke ịrịọ mgbaghara maka okwu a dị mma, ihe m aghọtaghị bụ na ọ gara n'ihu na-ebipụta ya.
Ihu ọma 2 afọ gara aga na recursively ọ bụla onye ọ bụla ma ọ bụ ọnwa abụọ m chọọ internet maka otú na-agba ọsọ android ngwa ọdịnala na Ubuntu ịhụ otú nke bụ. Naanị ihe m nwere ike ịchọta bụ ịmalite ime ihe, emulator nke na-eweta SDK na mmemme maka windo na ịkwụ ụgwọ. N’agbanyeghi na imara androidx86 ogologo oge, echiche m guru abughi ihe na-agba ume mmepe na oganihu. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọbụnadị ndị otu androidx86 tụrụ aro ịwụnye ya, nke mere ya bụ ịnụ ụtọ ahụmịhe nnwale. Ọfọn, ịme ihe karịrị ikike m, sdk na-arụ ọrụ mana ọ na-adịghị nwayọ na maka ngwa dị mfe, ma kwụọ ụgwọ mba. Na Androidx86 ugbu a n'agbanyeghị eziokwu ahụ ọtụtụ nkuzi na-ekwu na Nsogbu nke Clan na-arụ ọrụ enwetaghị m, ọ bụ ezie na ị chọrọ ịmata ma ọ bụrụ na Boom Beach rụụrụ m ọrụ.
Isiokwu a na-emepe ohere ọhụrụ maka m maka ihe m bu n'obi: Magicgba Magic 2015 na Okenye Okenye: Omen, nke opekata mpe m nwere ike ịrụ ọrụ na androidx86 4.0RC.
Ọ bụrụ na mmadụ ejisie ike mee nke ọ bụla dị n'elu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha achọta ụdị egwu a na-arụ ọrụ maka ha biko nye ndụmọdụ na ọ nwere ike ire.
Adị m onye mmemme gam akporo site na nsụgharị mbụ ya na ụbọchị ndị a Genymotion bụ, n'echiche m, ọ kachasị mma iji gbaa ngwa gam akporo na GNU / Linux. Ọ chọrọ VirtualBox ma ọ bụ n'ezie fancy. Versiondị maka iji onwe gị bụ n'efu.
Ekwenyere m na gị. M tinyere ya ma ha leghaara m anya. Amaghị m ihe kpatara ya. Genimotion bụ, n'echiche m, nhọrọ kacha mma iulationomi taa.
Ee, egewo m gị ntị, echere m na m ga-eme akụkụ nke abụọ mana mbụ m ga-eme ihe ndị ọzọ.
Daalụ, dị ezigbo mma, ị gbakwunyebeghị Genymotion, nke bụ n'efu maka ojiji nkeonwe, na iji ndebiri ọ na-eulatesomi ezigbo ngwaọrụ na Igbe Virtual.
M nwere arụnyere na ọbụna ụfọdụ egwuregwu na-arụ ọrụ na ihuenyo zuru ma ọ bụ na windo. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ngwa niile na-arụ ọrụ. Have ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ iji wụnye google play - o doro anya na ọ bụghị iwu na ọ ga-abịa tinye ya, ma ọ bụrụ na ị wụnye ya - ọ na-arụkwa ọrụ dị ka amara.
Daalụ maka nkuzi !!! Abatara m ebe a maka ekele mmadụ tweet !!!
nke kacha mma post mgbe
Zaghachi Gibrán Alexis Moreno Zuñiga
Ozi ị tinyere n'isiokwu ahụ na-atọ ụtọ, mana ikwu banyere Spanish anaghị adị ebe ọ bụla.
Ana m echetara gị na na mba ndị ahụ ị na-ekwu na ha toro ogo, ị nweghị ike wedata windo ụgbọ ala ma ọ bụ tinye mkpuchi n'ihi na ha gburu gị, ị gaghị agagharị n'okporo ámá n'ihi na ha nwere ike igbu gị, ebe na Spain ịla azụ ị nwere ike ịga ije na-enweghị ụdị ọ bụla nke nsogbu n'okporo ámá.
Otu ihe bụ enweghị nkatọ onwe onye na ihe ọzọ bụ nzuzu nzuzu nke ọtụtụ ndị obodo nwere na Spanish a.
I meela nke ukwuu maka nkuzi a, achọrọ m ịma otu esi eme ya ogologo oge.
Microsoft na-akpọ gị òkù ka ị mee ememme Debian Jessie